TAMAANDHO "MIKADO PINK": SHARAXAAD IYO MUUQAALADA KORAYA EE LAGU KORIYO - NOOCYO YAANYO
Dhadhanka, muuqaalka iyo wax soo saarka ee noocyo yaryar oo hore yaanyo ah "Mikado Pink" ayaa heshay qiimeyn ku filan oo macaamiisha ah. Muddo 2 sano ah oo jiritaan, noocan oo kale ah oo lagu sharaxay naqshadaha yurubiyaanka ah iyo waxay kasbatay magaca aan la magacaabin "imperial". Aynu sii degganaanno tayada yaanyada "Mikado pink" ee sifooyinka iyo daryeelka.
Yaanyo "Mikado Pink": dabeecad
Wixii iibka ah waxaa jira tiro badan oo geedo yaanyo loo yaqaan "Mikado". Qalabka la soo jeediyay waa kuwa soo saaraha kala duwan, baakadaha iyo, marka ay soo baxdo, midhaha. Tani waxay dhacdaa sababtoo ah khiyaamo caadi ah ee macaamiisha. Xaqiiqdu waxay tahay tan laga bilaabo 2015 illaa maanta, Diiwaanka Gobolka wuxuu leeyahay hal nooc oo keliya, Mikado Pink. Waanu fahmi doonaa waxa uu yahay.
Ma taqaanaa? Muddo dheer, yaanyada ayaa loo tixgeliyaa sun ah waxayna ka baqdeen iyaga. Waxay xitaa hoos u dhacday taariikhda sida mid ka mid ah makhaayad Maraykan ah oo loo yaqaan 'chef' oo isku dayay in uu sumawo George yaan la yareeyo lacag.
Si ay ugxan-yari uga sameysanto duurka, waxay qaadataa ilaa 100 maalmood. Inta lagu jiro wakhtigan, si sare ee xilli sii kordhaya, geedka ee furan dhulka ku dhowaad ku dhowaad laba mitir ee height. Qaar ka mid ah tijaabooyinka waxay u koraan 2.5 m. Maqsinnadu waxay noqdaan kuwo awood leh, waxay u baahan yihiin inay jeexjeexaan oo qanjiraan barta koritaanka. Caleenta - midab madow mugdi ah, cabbirka yar. Miraha waxay bilaabaan inay sameeyaan on caleen 8aad oo leh xajin dheeraad ah ilaa 3 petioles caleen. Mid ka mid ah inflorescence, sida caadiga ah, oo ku saabsan 8 yaanyada ayaa la dhigay. Ubaxa waa mid fudud. Kala duwan waxaa loo tixgeliyaa mid dhexdhexaad ah oo lagu beeray inta badan xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo.
Miraha waxay ku kala duwan yihiin qiyaasta waaweyn iyo saxarka cufan ee cufan. Miisaanka celceliska mid ka mid ah tamaandhiga ku jirta 400 g Tamaandhiga "Mikado pink" oo dibedda ah, sida ku cad sharaxaadda, waxay leedahay wax badan oo ka mid ah noocyada kala duwan ee "Bull's Heart": qaab qaab-wareeg ah oo leh dhinacyo cad oo dhinacyada, midab casaan leh, dhadhan macaan oo macaan. Gudaha waxaa ku jira qiyaastii 6-7 qol oo qashin ah. Maqaarka Elastic wuxuu u ogolaanayaa midhaha inay sii dheeraato muddo dheer.
Ma taqaanaa? Qoro yaanyo waaweyn oo lagu beeray beero ku yaalla Wisconsin (USA). Miisaanka miro gaar ah wuxuu ahaa 3 kg.
Laga soo bilaabo hal warshad waxaad soo ururin kartaa dalag cagaaran oo tayo leh, oo la siinayo dhaqanno beereed oo karti leh. Gaar ahaan, tirada miraha waxaa saameeya masaafada u dhexeysa duurka iyo nidaamka heerkulka. Warshadu waxay ku habboon tahay + 20 ... +25 ° C, laakiin haddii heerkulbeeggu hoos u dhaco + 16 ° C kulaylka iyo hoos, fariin degdeg ah ayaa bilaabmaysa sameynta tirada ugxan.
About ku saabsan tamaandhada yaanyada ee beerto iyo daryeelka, taas oo ninkii beerta walba waa in la ogaado, waxaan ku tilmaami doonaa hoos. Oo, haddii aad u xisaabtanto, ka dibna asaas kasta wuxuu soo saari doonaa ugu yaraan 40 yaanyo casiir ah.
Inkasta oo tayada ilaalinta wanaagsan ee miraha, waxaa lagula talinayaa maaddooyinka lagu kariyo saladhka iyo isticmaalka cusub. Hooyooyin badan oo isku dayay inay ilaaliyaan yaanyada kala duwan ee Mikado Pink kala duwan, dib u eegis, xusuusnow isbedelka dhadhanka miraha ka soo weelka. Laakiin isla markaa waxay ka hadlaan suurtogalnimada inay abuuraan dharka maraqyada, yaanyo, juuska iyo xitaa casiir. Laakiin cuntada qasacadaysan ee qasacadaysan oo dhan laga soocay yaanyada cagaaran ee kala duwan ee noocaas ah waa mid aad u badan oo ka baxsan kuwa soo bislaaday.
Tamaandho waa la kariyaa oo la sifeeyaa, la isku daraa si fudud oo dhir udgoon iyo cagaarka ama khudaar kala duwan iyo xitaa miro - basbaaska macaan, kaabajka, qajaarka, tufaaxa, iwm. Xitaa waxaad ka dhigi kartaa macmacaan khudraddan cajiibka ah!
Nidaamka ugu fiican ee beerto geedo yaanyo
Buundada yaanyada ee nooc kasta oo kala duwan u baahan kulayl iyo iftiin badan, sidaas darteed waxaa si xoog leh lagula talinayaa in aan dhumucdiisan. In lagu koriyo, halkaas oo uu jiro meel yar, nuance this waa in la tixgeliyaa marka la qorsheynayo dhulka. Masaafada u dhexaysa sprouts iyo inta u dhaxaysa safarka waa 50 cm, haddii kale, koriinka afkoda ayaa iska xiiri doona midba midka kale, meesha u dhexeysa dhulka iyo caleenta ayaa si fiican u hawoqonaya, taasoo ugu dhakhsaha badan qoyaan badani saameyn doonto muuqaalka muuqaalka. Waxaa fiican in la dhigo taageerooyinka cawska at hal mar godad loo diyaariyey geedo. Dhererka dhererka waa inuu noqdaa ilaa 3 m.
Ma taqaanaa? Si aad u dhaqaajiso Bisaylka Tamaandhada, bannaanka qaar ka saaro caleenta oo dhan ka soo hooseeya oo giigsanaya asliga ah, samaynta jarjar yar oo dhererkiisu yahay 5 cm oo leh maqdhal, Naanaabin noocan oo kale ah waxay xadideysaa nafaqada dhirta.
Talooyin daryeel yaryar "Mikado Pink"
Tamaandho "Mikado Pink" ayaanan dalbanin beerashada. Wixii horumarinta habboon, dhirta u baahan tahay si loo hubiyo in qulqulaya waqtigeeda iyo dabacsanaanta ciidda, hilling of duurka, ka hortagga horumarinta haramaha, si joogto ah u bacrimiya nidaamka xididka, iyo sidoo kale waa muhiim in si fiican u tallaabi geedo. Laakiin sidan oo kale ayaa habboon.
Waraabinta, dabacsan iyo hilling
Tamaandhada si buuxda uguma kicin karo dhul qalalan, waxay jecel yihiin qoyaan. Laakiin markaad waraabiso waa muhiim inaad ilaaliso qiyaasta iyo inaadan dhaafin, sababtoo ah qoyaan badan oo ciidda badanaa waxay keeni karaan kororka duurka. Tamaandho ayaa si weyn kor ugu kici doona afkoda, iyaga oo ka dhaadhicinaya dhammaan kheyraadka ay u baahan yihiin sameynta miraha. Si looga hortago tan, geedo waa in la waraabiyaa subaxdii wax ka badan 2-4 jeer usbuucii. 2-3 maalmood ka dib markii laga beerto tamaandhada, waa lagama maarmaan si loo dabciyo godadka pristvolnye iyo hubiyo in qaloocin qalalan macaan foom ka dib markii waraabinta. Oo marka geedo soo baxaan, ka dib 7 ilaa 10 maalmood, warshad kasta waa in la qodo.
On sariirta yaanyo ah waa in aysan noqonin dhirta xad-dhaafka ah, gaar ahaan caws. Marka laga soo tago xaqiiqda ah in ay nuugaan walxaha ay ka faa'iideysanayaan kobcinta carrada, waxay ku nool yihiin cayayaanka waxyeellada leh ee ah bakteeriyo iyo fayras. Natiijada xaafadaas, yaanyada waxay noqdaan kuwo aad u xasaasi u ah cudurada fungal iyo bakteeriyada. On dhulka u furan, bannaanka qaar ka mid ah u dhigmaa mulching, iyo xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo waxaa ka wanaagsan in ay fuliyaan jaridda dhirta joogto ah. Intaa waxaa dheer, qaabsocodkani wuxuu hubin doonaa bixinta oksijiin ee xididada.
Waa muhiim! Guga, marka iftiinka dabiicigu uu socdo oo keliya 12 ilaa 13 saacadood, nalalka dheeriga ah waa in lagu diyaariyaa lagu koriyo, haddii kale horumarinta tamaandhiga ayaa astaan ​​u ah joojinta, inflorescences ugu horeysa uma muuqan doonto 7-8 caleen (sida ay tahay), laakiin 13-ka.
Tamaandho "Mikado Pink" ayaa aad u dalbanaya ciidda, markaa, si loo kordhiyo dhalidda ay si joogto ah u quudinayaan. Quudinta koowaad waxaa lagula talinayaa hal usbuuc kaddib marka la beero geedo. Ka dib markaad joojiso mudo 14 maalmood ah, nidaamku waa soo noqnoqonayaa. Iyadoo horumarinta daciifka ah ee duurka iyo dhirta dabayshu liidato, 2 toddobaad kadib, quudinta saddexaad ee la oggol yahay. Sida bacriminta on sariiraha yaryar isticmaali xal digir digaag (ee saamiga 1:15) ama Doodwanaag (1: 8). Ha ku dhaafin: dharka ciriiriga ah waa mid aad u liidata beergooyska saboolka ah iyo caleemaha geedka.
Qaadida baadiyaha iyo pasynkovanie
Sidaas darteed geedo aan ku faafin on dixiriga inta lagu guda jiro beerista ee lagu koriyo ah, bannaanka u khibrad soo saar 2 caleemaha hoose on the afkoda. Trick This muddo ka dib joojiyaa koritaanka ee asliga ah iyo gacan ka si ay xoojinta, iyo sidoo kale horumarinta caleemaha lateral. Isla mar ahaantaana, nidaamka xididka ayaa kora.
Ku dhowaad dhammaan noocyo yaanyo ah ayaa awood u leh inay si fiican u soo baxaan, oo laga sii daayo kelyaha kasta ee axil caleenta ee stem ugu weyn ee laanta laanta. Tani waa mid xun, sababtoo ah sprouts noocyada badan, yar yar iyo yar yar midhaha. Si aad u dardar geliso korriinkooda waxaa lagu sameyn karaa adoo baraya. Nidaamku wuxuu ka kooban yahay nidaamka nidaamsan ee caleemaha lateral gaaraya 2-3 cm. Asal ahaan, 2, ugu badnaan 3, ugu weyn ee afkoda ayaa ka tagay geedkii 2.
Waa muhiim! Si looga hortago jilay cusub oo ka soo baxaya goobta fog, dhar yar, 1 cm dheer, waa in la tagaa.
Si loo sameeyo baadiyaha yaanyada, qanjaruufo talooyinka caleemaha waa muhiim. Nidaamkani wuxuu xaddidaa kobcintiisa kaddibna wuxuu dardar-gelinayaa Bisaylka miraha. Goobta qaliinka noocan oo kale ah waa in la go'aamiyaa inta u dhexeysa 2-4 inflorescences. By habka, marka xaaladaha beerista yaanyada ee beerta, cimilada qoyan, ka saarista dushooda waxaa lagu qorsheeyey marxaladaha hore. Intaa waxaa dheer, ka fiirso baahida loo qabo in laga saaro dhammaan burooyinka ubaxa ee aan haysan waqti ay ku sameeyaan.
Marka la eego xaqiiqda ah in yaanyada "Mikado Pink" loogu talagalay in lagu koro oo lagu koriyo oo lagu sifeeyo noocyo kala duwan, qanjaruufo waa in la abaabulo horraantii Agoosto.
Garter on trellis
Dhirta Garter ee taageerooyinka waa mid aad u muhiim ah, maxaa yeelay miisaanka culus ee jilicsanaanta miraha la jebin karo. Intaa waxaa dheer, la'aanta goobaha hawada ee qaybta xididka ee duurka waxay ka qayb qaadan doonaa horumarinta phytophthora. Maqnaansho maaddada lagu rakibay markaad beerto geedo. Waxyaabaha ugu muhiimsani waa in sida aad horumariso, waxaad ku lifaaqdaa dhaqdhaqaaqa dheer si taageero. Doorka garafaha ma aha silig wacan, xadhig khafiif ah, xadhig ah - dhammaantood waxay dhaawici karaan, xiitaa burburin karaan, asliga ah. Waxaa fiican inaad isticmaasho cajalado dhar dhaadheer. Beddelka ah iyaga ayaa ah qalab iibsasho caag ah si ay u taageeraan duurka.
Faa'iidada ugu weyn ee trellis ah waa in for goosashada weyn ee, waxaa suurtogal ah in la oggolaado ma aha oo kaliya dhexe ee afkoda si ay u koraan, laakiin sidoo kale ah lateral afkoda, si tartiib ah iyaga xiraya, iyo ku lifaaqo inflorescences in ay qabato khaas ah.
Waa muhiim! Dareemida miraha cagaaran waxay ka dhalataa isbeddel adag oo qoyaanka ah. Si loo xaliyo xaaladda waxay noqon kartaa mid aad u tiro badan oo waraabka lagu kululeeyo hawada kulul iyo daboolida dhirta oo daboolaya alaabada.
Tamaandhada waa mid aad u xasaasi u ah jirooyinka iyo cayayaanka. Dhirta Kuwani waxay si joogto ah u hanjabeen by masaakiic, dabaylo goor dambe, noocyo kala duwan oo kallana, Alternaria, anthracnose, bacterial iyo brown, kansarka iyo wixii la mid ah. Dabcan, ka hortagga ugu fiican wuxuu ku jiraa tiknoolajiyada beeraha iyo awoodda iyo abuuritaanka xaalado wanaagsan oo horumarinta dhaqanka. Laakiin haddii wax khaldamay, cayayaanka xooggan iyo fungicides ayaa iman doona badbaadada. Kuwa ugu caansan: Maxim, Prestige, Barrier, Barrier, Fundazol, Hom. Ka hor inta beerto abuur, waxaa lagama maarmaan ah la qaado, iyo geedo ayaa sidoo kale lagu daaweeyaa.
Si aad u badbaadiso dhirta cayayaanka caarada, caanaha nadiifka ah, rinjiga, xajmiga iyo caddaanka, jeermiska ayaa lagama maarmaan ah daroogada Aktara, Bi 58 - Cusub, iyo sidoo kale isbedelka lakabka sare ee carrada ee aqalka dhirta lagu koriyo iyo qulqulka qoto dheer ee kubadaha hoose.